Akhriso:Xarakada Al Shabaab oo Beenisay Warar Sheegayay in Ay Weerar Uqorshaysay Dalka Uganda.
Monday September 15, 2014 - 19:53:01 in Wararka by Super Admin
Warsaxaafadeed kasoo baxay xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu beeniyay warar dacaayad umuuqday oo dhawaan ay ku hadaaqayeen madaxda xukuumadda Uganda kuwaasi oo ku saabsanaa in ciidanka ammaanka wadankaasi ay fashiliyeen Weerar ka dhici rabay m
Warsaxaafadeed kasoo baxay xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa lagu beeniyay warar dacaayad umuuqday oo dhawaan ay ku hadaaqayeen madaxda xukuumadda Uganda kuwaasi oo ku saabsanaa in ciidanka ammaanka wadankaasi ay fashiliyeen Weerar ka dhici rabay magaalada Kampala.
Shabaabul Mujaahidiin waxay sheegtay in wararkaasi ay yihiin been abuur aan sal iyo raad lahayn,warsaxaafadeedka oo uu ku saxiixnaa Sheekh Cali Maxamuud Raage Sheekh Cali dheere afhayeenka Al Shabaab ayaa lagu faah faahiyay ujeedka ay Uganda ka leedahay faafinta dacaayadda ah in ay fashilisay weerar ay shabaabul Mujaahidiin fulin rabtay.
"Maalmahan waxaan warbaahinta ka maqlaynayay warar dacaayaad ah oo ay faafinaysay dowladda Nasaarada Uganda oo ku aadanaa in ay fashilisay weerar ay mujaahidiintu qorsheeyeen oo gudaha Uganda ka dhici lahaa,wararkaasi waa been aan raad laheyn haba yaraatee majiraan weerar ay mujaahidiintu qorsheeyeen oo Uganda fashilisay"ayaa lagu yiri warka kasoo baxay mujaahidiinta.
Xarakada Al Shabaab waxay soo hadal qaaday sheegashada saraakiisha Uganda ee ah in ay gacanta ku dhigeen muwaadiniin Soomaali ah oo mujaahidiinta lala xariiray iyo walxaha qarxa iyo hub,wararkaasi oo idil ayay mujaahidiintu ku sheegeen been abuur ladoonayo in lagu duugo fashilka ciidanka gumeysiga AMISOM kasoo wajahay Soomaaliya.
"Museveni markii ciidankiisu ku jabeen duullaanka Soomaaliya oo shacabka soomaaliyeed ogaadeen damban daabyadooda ayay bilaabeen in ay dadkooda ku mashquuliyaan dacaayad aan jirin oo ah in ay fashiliyeen weerar mujaahidiintu qaadi rabeen,haddii mujaahidiintu qorsheeyaan weerar way fulinayaan insha'allaah suurtagalna ma ahan in hay'adahooda ammaanka ay ka hortagaan camaliyaadka mujaahidiinta"ayaa lasii raaciyay warka kasoo baxay shabaabul Mujaahidiin ee Sheekh Cali dheere ku saxiixanyahay.
Raafka shacabka Soomaalida Kampala waxaa lagu duugayaa Fadeexaddii Kufsiga AMISOM:Warka kasoo baxay xarakada Al Shabaab ayaa lagu xaqiijiyay in ujeedka Uganda ka laheed qaadidda howlgalka raafka ah ee ka dhanka ah jaaliyadda soomaalida uu salka ku hayo boobka hantida shacabka soomaaliyeed in caalamka lagu hilmaansiiyo fadeexadii AMISOM kala kulantay kufsiga joogtada ah oo ay kula kacdo shacabka Soomaaliyeed.
Maxkamad melleteri oo Kampala kutaal ayaa lafilayaa in bilaha soo socda ay xukunno ku riddo saraakiil ku eedaysan musuq maasuq iyo tuugaysi ay ku sameeyeen saadka ciidan ee loogu talagalay ciidamada Uganda ee Soomaaliya ka dagaalamaya.
"Shacabka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa in cadawgu uu marmarsiiyo uraadsanayo boobka hantida shacabka iyagoo ku tiimbaraynaya Mujaahidiinta Al Shabaab ayaad katirsanyihiin,dadka ay booliska gaaladu ku qabteen magaalada Kampala kama tirsana mujaahidiinta waa dad ladoonayo in hantidooda labanaysto laguna duug duugo kufsigii iyo xadgudubyadii ciidanka gaalada Uganda ugeysteen haweenka muslimaadka soomaaliyeed".
Warsaxaafadeedkan kasoo baxay mujaahidiinta Soomaaliya wuxuu kusoo aadayaa xilli dowladda Uganda ay maalmihii lasoo dhaafay ay faafinaysa borobogaando ah in ay ka hortagtay weerar dhanka shabaabul Mujaahidiin uga imaan rabay,falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda ayaa sheegaya in Uganda ay cadaadis dhan walba ah kala kulantay wadamada reer galbeedka ee dhaqaalaha kusiiya duullaankeeda soomaaliya kadibna ay go'aansatay in ay qaaddo wax walba oo ay isaga khafiifin karto culeyska saaran.
Isha Warka:Idaacadda Andalus